ပညာပေးမကျဆလေ့ေးတှပေေးပါတယျ…အိမျထောငျရှငျတှရေော လူပြိုတှပေါကွညျ့သငျ့တယျ..ဇာတျလမျးလေးကိုအတိုခြုပျပွောပွပေးပါ့မယျ…အသကျကွီးကြောငျးဆရာတဈယောကျက တကျသှေးကွှအပြိုဖွနျးလေးကိုယူမိတာက စတာပါပဲ…သူမရဲ့ရုပျရညျကညှနျးစရာမလိုအောငျပွညျ့စုံလှနျးလှပါတယျ…ဒါပမေဲ့ သူမမှာလိုအပျခကျြရှိနပေါတယျ အဲဒါကတော့ အသကျကွီးတဲ့ယောကြာင်္းကိုယူခဲ့မိတာပါပဲ…သူမရဲ့အသကျအရှယျနဲ့တမြှလကျဆကျနတေဲ့ ရာဂမီးကို ကြောငျးဆရာအိုကွီးက ညှိမျးမပေးနိုငျတာပါပဲ…လူ့စိတျဆိုတာ အခကျသားကလား…လငျမယားဖွဈနပေမေဲ့ ခံစားခကျြတှကေိုမထုတျဖျောကွဘူးလေ… ကွိတျပွီးခံစားနကွေတယျလေ…ကောငျမလေးက မနနေိုငျတော့ အှနျလိုငျးကနပေစ်စညျးတှမှောပွီး အာသာဖွတေော့တာပါပဲ…အဲဒီအတောအတှငျးမှာပဲ အိမျနီးခငျြလငျမယားသဈ တဈတှဲ ထပျရောကျလာပါတယျ…သူတို့လငျမယားကလညျးအပေးအယူမတညျ့ကွလို့ ကတောကျကဆတှနေဲ့ပါပဲ…ဘာတှဘေယျလိုဆကျဖွဈမှာလဲဆိုတာတော့ စဉျးစားမနပေဲ အပွေးသာဒေါငျးကွညျ့ပတေော့ဗြာ…တဈကယျတနျမှာပါဗြာ…စကားမစပျ အကွညျ့နဲ့တငျအရညျပြျောသှားနိုငျတဲ့ AV မငျးသမီးကွီးတှသေရုပျဆောငျထားတာဖွဈလို့ မိသားစုနဲ့ကွညျ့ဖို့မသငျ့တျောပါဘူး…စကားမစပျ FA တှအေတှကျ ရညျးစားစကားပွောနညျးအသဈတှရေ့မှာပါ ?
ဇာတ်ကားတစ်ကားကို ပရိတ်သတ်လက်ထဲထည့်တော့မယ်ဆိုရင်…ဘာသာပြန်တဲ့သူလည်း အပင်ပန်းခံ တင်တဲ့သူလည်းအပင်ပန်းခံပြီးတော့ ဒေါင်းတဲ့သူတွေလည်းအကျိုးရှိအောင် ရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ရပါတယ်….ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ အားလုံးနဲ့လုံးဝအဆင်ပြေစေမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်…18+ အများစုကတော့ လိုရာရောက်အောင်ဆွဲယူတက်ကြပေမဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ထူးခြားပါတယ်..
ပညာပေးမက်ဆေ့လေးတွေပေးပါတယ်…အိမ်ထောင်ရှင်တွေရော လူပျိုတွေပါကြည့်သင့်တယ်..ဇာတ်လမ်းလေးကိုအတိုချုပ်ပြောပြပေးပါ့မယ်…အသက်ကြီးကျောင်းဆရာတစ်ယောက်က တက်သွေးကြွအပျိုဖြန်းလေးကိုယူမိတာက စတာပါပဲ…သူမရဲ့ရုပ်ရည်ကညွှန်းစရာမလိုအောင်ပြည့်စုံလွန်းလှပါတယ်…ဒါပေမဲ့ သူမမှာလိုအပ်ချက်ရှိနေပါတယ် အဲဒါကတော့ အသက်ကြီးတဲ့ယောကျာင်္းကိုယူခဲ့မိတာပါပဲ…သူမရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့တမျှလက်ဆက်နေတဲ့ ရာဂမီးကို ကျောင်းဆရာအိုကြီးက ညှိမ်းမပေးနိုင်တာပါပဲ…လူ့စိတ်ဆိုတာ အခက်သားကလား…လင်မယားဖြစ်နေပေမဲ့ ခံစားချက်တွေကိုမထုတ်ဖော်ကြဘူးလေ… ကြိတ်ပြီးခံစားနေကြတယ်လေ…ကောင်မလေးက မနေနိုင်တော့ အွန်လိုင်းကနေပစ္စည်းတွေမှာပြီး အာသာဖြေတော့တာပါပဲ…အဲဒီအတောအတွင်းမှာပဲ အိမ်နီးချင်လင်မယားသစ် တစ်တွဲ ထပ်ရောက်လာပါတယ်…သူတို့လင်မယားကလည်းအပေးအယူမတည့်ကြလို့ ကတောက်ကဆတွေနဲ့ပါပဲ…ဘာတွေဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတာတော့ စဉ်းစားမနေပဲ အပြေးသာဒေါင်းကြည့်ပေတော့ဗျာ…တစ်ကယ်တန်မှာပါဗျာ…စကားမစပ် အကြည့်နဲ့တင်အရည်ပျော်သွားနိုင်တဲ့ AV မင်းသမီးကြီးတွေသရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်လို့ မိသားစုနဲ့ကြည့်ဖို့မသင့်တော်ပါဘူး…စကားမစပ် FA တွေအတွက် ရည်းစားစကားပြောနည်းအသစ်တွေ့ရမှာပါ ?
File size - 500MB
Link - https://gplinks.co/AnUK